Mogadishu Journal » 2017 » July » 14
Mjournal :- Madaxweynaha Somaliland, Mudane Axmed Maxamed Silaanyo iyo weftigii uu hoggaaminayey ee safarka ku joogay Imaaraadka Carabta ayaa saaka dib ugu soo laabtay dalka iyadoo si balaadhan loogu soo dhaweeyey caasimada Somaliland ee Hargeysa. Subaxnimadii hore ee saaka waxa...
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay inuu khilaaf u dhaxeeyo Baarlamaanka iyo Xukuumadda, isagoo xusay in wararkaas ay baahiyeen shaqsiyaad dano leh. Ra’iisul Wasaare Kheyre oo ka hadlayay kulan uu shalay kula qaatay...
Guddiga arimaha dibadda baarlamaanka oo qoraal ka dhan ah khilaafka Khaliijka u diray madaxweynaha
Mjournal :-Guddoomiyaha Guddiga Arrimaha dibadda ee Golaha shacabka C/qaadir Cosoble Cali ayaa Madaxweynaha Soomaaliya u gudbiyay warqad ku saabsan khilaafka dalalka Khaliijka iyo walaac xubno ka tirsan Guddiga ka muujiyeen mowqifka ay ka qaadatay dowladda Federaalka. Warqadan oo...
Dowladda oo ka hadashay dib u hagaajinta Internetka Fiber Optic
Mjournal :-Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in maanta oo jimco ah la bilaabayo sameynta Internet-kii Fibre Optic ee todobaadyo ka hor ka go’ay gobolada Koofureed ee Soomaaliya, kaddib markii Markabkii sameyn lahaa uu soo gaaray Dekeda Muqdisho. Agaasimaha Wasaaradda...
Ra’iisal wasaare Kheyre oo dhagax dhigay dhismayaal magaalada Kismaayo
Mjournal: -Xasan Cali Khayre, Ra’iisul Wasaaraha Somaliya, ayaa gelinkii dambe ee Khamiistii dhagax dhigay laba dhismo oo lagu wado in laga hirgeliyo Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose. Dhismooyinkan, ayaa waxaa loogu talla-galay inay ku shaqeeyan Wasaaradaha Beeraha,...